Home Wararka Maanta Mareykanka oo duqeyn culus ka fuliyey gudaha Soomaaliya
Mareykanka oo duqeyn culus ka fuliyey gudaha Soomaaliya
Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyey howl-gal dhanka cirka ah oo iyaga oo kaashanayaa ciidamada dowladda ay 22-kii bishan ka fuliyeen deegaanka Dudubley ee gudaha dalka Soomaaliya.
Warsaxaafadeed kasoo baxay AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xoogaga Al-Shabaab, isla-markaana ay haatan socoto qiimeyn ballaaran oo ku aadan khasaaraha weerarkaasi kasoo gaaray kooxda.
AFRICOM waxay sidoo kale xaqiijisay in aysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntaasi.
“Qiimaynta khasaaraha dagaalka ayaa wali la sugayaa. Qiimeynta bilowga ah ee taliska ayaa ah in aysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed uu soo saaray taliska AFRICOM.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada Maraykanka loo fasaxay inay fuliyaan weeraro lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya ee la howlgala kuwa Mareykanka sida uu dhigayo oggolaashihii Isticmaalka Ciidanka Milatariga Mareykanka ee sanadkii 2001-dii.
Mareykanka aya sidoo kale shaaca ka qaaday inuu qaadayo tallaabooyin looga hortegayo weerarada halista ah ee ay fuliso kooxda Al-Shabaab oo kordhay maalmihii dambey.
“Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee Afrika ayaa qaadaya tillaabo weyn oo looga hortagayo khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah. Dadaalladan ayaa ka duwan weerarada aan loo meel dayin ee ay Al-Shabaab si joogto ah u geysato dadka rayidka ah,” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka AFRICOM.
Duqeyntan ayaa noqoneyso tii ugu dambeysay ee uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya, kadib markii uu bilooyinkii lasoo dhaafay hakiyey weeraradii ka dhanka ahaa Al-Shabaab